G talk invisible software - MYSTERY ZILLION
G talk invisible software
September 2010 edited September 2010 in Web Base
Gtalk invisible software လေးလိုချင်လို့ပါ။
မတောင်းခင်အရင်ရှာဆိုသလို ရှာကြည့်ပြီးသွားပါပြီ တွေ့လည်းတွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလုပ်လင့်တွေအကုန်လုံးက expire ဖြစ်သွားတာလားမသိဘူး :O:O ဒေါင်းလုပ်ဖိုင် ကိုမတွေ့တော့ဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ (ရှိရင်လမ်းညွန်ကူညီပေးကြပါဦးဗျားးးးးးးးးးးးးး
Google talk lab edition ကိုဆိုလိုတာနဲ့တူပါတယ်. ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါ.
window7မှာမ run ဘူး။ဘာလို့လဲသိဘူး
Gtalk invisible က Gmail ထဲမှာ သွားလုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား? .. . ဘာဖြစ်လို့ invisible လုပ်ချင်တာလဲ???
Gmail ထဲက Invisible လုပ်တာကို တော်တော်များများသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်တယ့်အလုပ်နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာ Gmail standard version မှာ attach ကို upload လုပ်ရတာအဆင်မပြေပါဘူး ၊ အဲတော့ attach ကောင်းကောင်းတင်လို့ရတဲ့ HTML version ကိုပြန်သုံးရပါတယ်။ အဲဒိမှာ သိတဲ့အတိုင်းဘဲ Gtalk မပါဘူးလေ အဲတော့ Gtalk သက်သက်ပြန်သုံးရပါတယ်။ အဲဒိအတွက်ပါခင်ဗျ :rolleyes:
ကျွန်တော်လဲ windows7နဲ့သုံးလို့မရဘူးဗျ. gmail ကနေပဲတက်နေရပါတယ်.